जनै खटिरा भनेको के हो ? लक्षण र उपचार - ज्ञानविज्ञान
जनै खटिरा (हर्पसजोस्टर) एक प्रकार को भाइरल इन्फेक्शन हो । एसलाई पीडादायक समस्या को रूप मा लिन सकिन्छ । किनभने छाला मा देखिने यो रोग मा स-साना पानीफोका जस्ता आउने खटिराहरु चिलाउनुका साथै असह्य रुपले दुख्ने समस्या हुन्छ ।
चिकनपोक्स अर्थात् ठेउला को कारक का रूप मा परिचित भेरिसेला जोष्टर नामक भाइरस को संक्रमण ले यो रोग लाग्दछ । अंग्रेजी मा एसलाई शिंगल्स (shingles) तथा डाक्टरी भाषा मा यसलाई हर्पस जोस्टर भनेर चिनिन्छ भने नेपाली मा जनैखटिरा का नाम ले प्रसिद्ध छ
जनै खटिरा एक प्रकार को छाला को रोग हो । प्रायः एक पटक ठेउला भइसकेका व्यक्ति लाई हुने भएकाले यो प्रौढहरु मा बढ्ता देखिने गरेको छ । एसलाई सामान्य खाल को छाला को रोग ठान्ने भ्रम मा पर्नु हुँदैन । शरीर को रोग प्रतिरोधी क्षमता कम भएका बेला मा एसको आक्रमण हुन सक्छ । समय मै एसको उपयुक्त उपचार भएन यो जानलेवा पनि हुन सक्छ ।
२. ती बिमिरा निस्केका ठाउँ मा चिलाउने, पोल्ने र दुख्ने ।
४. ती घाऊहरु मा पोलेका घाऊ मा झैं नै पानी भरिने र फुट्ने । सँगै असह्य पीडा हुने ।
चिकित्सक ले बिमिराहरु हेरेर तथा सामान्य परीक्षण बाटै जनै खटिरा को निदान गर्ने छन्। एसको घरेलु उपचार पनि प्रभावकारी देखिएको छ । सँगसँगै चिकित्सक ले गर्ने निम्नांकित उपचार पनि लाभदायक सिद्ध हुने छ
Don't Miss it छारे रोग, लक्षण, कारण र उपचार